Allgedo.com » Hanjabaad ka dhan ah Shabaab-ka Gedo oo kasoo yeeray dowlada Soomaaliya
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, December 11, 2012 // 4 Jawaabood
Saraakiisha ciidamada dowlada Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Gedo ayaa hanjabaad kulul u jeediyay Al-habaabka Gedo taasi oo ku aadan in ay gebi ahaanba gobolka ka saari doonaan Alshabaab.
Diyaad Cabdi Kaliil oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada huwanta ee ku sugan gobolkaasi ay isku diyaarinayaan in Alshabaab ay ka sifeeyaan Gedo.
Diyaad ayaa waxaa uu sheegay in dhawaan ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka sameynayaan deegaanada gobolka Gedo gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi.
Waxa uu yiri Diyaad Cabdi Kaliil “gobolada dalka oo dhan waxaa ka socda howlgalo ka dhan ah Alshabaab, Jowhar iyo Mahadaay waa la qabtay, lagamana reebayo Buurdhuubo iyo Baardheere”.
Ugu dambeyn, wuxuu xusay in Alshabaab awoodooda ay wiiqantay islamarkaana laga saarayo gobolada dalka Soomaaliya.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo marar badan ay Saraakiisha dowalda iyo kuwa Ahlu Sunna Waljamaaca ku hanjabayeen in ay qaban doonaan magaalada Baardheere.
4 Jawaabood " Hanjabaad ka dhan ah Shabaab-ka Gedo oo kasoo yeeray dowlada Soomaaliya "
Waa hormar otto guul I soo hoyetey dadweynahay ku dhaqan gobalka gedo ee ha laga saaro kuba dadka iyo labadaba hormsrkooda diidan
Maahan markii u horaysay ee ciidamo lagu soo tababaray kenya iyo itooobiya ay soo gaaraan gobolka Gedo iyo gobolada ka agdhaw,bishii hore ayay ahayd markii 600 oo askari oo lagu soo tababaray wadanka itooobiya ay soo gaareen deegaanka Dooloow Cado. Waxa ayna Saraakiisha sheegen in Ciidamadaasi ay sifeyn doonaan waxa loogu yeeray Al-Qacidada Somalia ee Alshabaab.
“Ciidamada tababarka loo soo dhameeyay waxaa ay gaarayaan ilaa 100 askari, waxaana tababarka ay qaadanayeen mudo 3 bil ah”ayuu sheegay Axmed Cabdullaahi Xersi oo uhadlay Saraakiisha ciidamada gobolka Gedo.
Saraakiisha Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa ku eedeeyay Xarakada Al Shabaab inay burburiyeen Ceelal biyoodyo ku yaalla gobolkaasi oo ay cabi jireen dadka shacabka ah.